A3 Digital T-Shirt Printing Machine China Manufacturer
Tsanangudzo:A3 Size T-Shirt Printer,T-Shirt Printing Machine,Digital T-Shirt Printing Machine
Home > Products > Digital Printer > T shirt Printer > A3 Digital T-Shirt Printing Machine
Muenzaniso Nha.: RF-A3 T 181015
Iyi huru yeA3 Digital T-Shirt Printing Machine inogona kushandiswa se t shirt printer, uv printer uye mharidzo yezvokudya. Iyi printer inogona kusangana nokukumbira kwako nokukurumidza. Inopera anenge hafu yemakore kuti ibudise iyi shanduro itsva, takarongedza iyi makina nezvose zvizere zvinoshanda uye white ink cycle system. The A3 Size T-Shirt Printer anogona kudhinda zvinhu zvakawanda, chete kunotora anenge 70 masekonzi / A4 saizi Logo, izvo zvinogona kuponesa nguva yako uye anogona kusangana chako chikumbiro sezvazviri zvikuru zvakasimba. Uyewo, ingoshandura mutoro wepinyorwa, CISS neinki inogona kushandiswa pafoni, mukombe wekombe, acrylic uye girazi. Ndizvo T-Shirt Printing Machine . Isu tafekitari, tine chikwata chakasimba kuti chikutsigire iwe kuti chikutungamirire iwe nekukurumidza zvikuru.
The Flatbed Printer is a type inkjet printing type high-tech michina yekudhinda midziyo inoshandisa chinhu chisingafambidzani, iyo inoshandiswa inzvimbo yakawanda kwazvo, iyo inyanzvi yekugadzirwa kwezvinhu muhuni hwemaoko, marudzi ose ekudhinda, kushandiswa kwekanyoro yekunyora. UV mumuchina ainyanya kushandiswa kudhinda pamusoro Phone goko, Card, U dhisiki, Mobile Power nevamwe duku saizi product`s munhu zvichienderana printing.we wedzerai hita pamusoro muchina ichi, saka rinogona okudhindira zvakananga pamusoro PC, PU, Leather, Eva, Silicone zvinhu nePk ink inotengeswa. Iyi inki hapana chidimbu chinofanirwa kuputira kusati kwadhindwa, uyewo hapana chikonzero chinochengetedza mushure mokudhinda, chinogona kuchengetedza munhu wacho; mushure mokunge chinyorwa chacho chaoma, zvinopesana nekupfeka, zvinoputika, doro rinopisa, mvura isina kunaka; , hapana chikonzero chaI ICC; hachizogadziri musoro wepinyorwa kana iwe usingashandisi mhepo 1 mwedzi, mari yakazara yakanyanya. Inonyatsoziva pfungwa yechokwadi yechinhu chimwe chete chinyorwa, pasina kubatiza, chizere chemufananidzo wakave wakapera.
Zvichienzaniswa nemasikirwo emichina ekudhinda, RFC digital Digital T-Shirt Printing Machine inokubatsira kuti uchengetedze kubudiswa kwechinyorwa, kupfidza kwekushisa kupisa uye dzimwe tsika dzekuita mapaiti yakaoma, inopedza kuburikidza nekuderedza kwemavara emhando yekasi, ino inyanzvi inogadzira kushandiswa kwemichina, kuderedza mari yebasa, kushandiswa kwemari shoma, kukwidziridzwa kwepamusoro, kukanganisa kwakadzika, zvakagadzirwa zvakakwirira zvakagadziriswa zvechokwadi! Iyo inogona kubuda muvara wemufananidzo wechinhu pane zvinhu zvose, zvinotapira, zvisingagadziri, zvisingaregi, zvisingaiti kubata, rusununguko rwemavara, rumwe rudimbu rwekupindira uye zvimwe zviitiko kuti kukurumidze kushandiswa kwedhijidhi mubhizimusi rokudhinda, kukura kwekugadzirwa kwakakwana uye 100% mushure mekutengesa basa.
Industrial Canvas Bag Flatbed Printer Bata Ikozvino
Digital Direct to Cap Printer Bata Ikozvino
USB Disk Printer Flash Disk Bata Ikozvino
A3 Canvas Bag Printer Machine Mutengo Bata Ikozvino
A3 Size T-Shirt Printer T-Shirt Printing Machine Digital T-Shirt Printing Machine A4 Size T Shirt Printer A3 T-Shirt Printer A3 T Shirt Printer A3 Flatbed T-Shirt Printer A3 Dtg T Shirt Printer